» कुलमान लाई प्रश्न ! – तपाईं हटे लगत्तै किन काटिन थाल्यो बिजुली ? कुलमानको जवाफ यस्तो छ, हेर्नुहोस भिडियो कुलमान लाई प्रश्न ! – तपाईं हटे लगत्तै किन काटिन थाल्यो बिजुली ? कुलमानको जवाफ यस्तो छ, हेर्नुहोस भिडियो – हाम्रो खबर
कुलमान लाई प्रश्न ! – तपाईं हटे लगत्तै किन काटिन थाल्यो बिजुली ? कुलमानको जवाफ यस्तो छ, हेर्नुहोस भिडियो
2021, January 20th, Wednesday
पछिल्लो समय फेरि बिजुलीको लाइन जान थालेको छ। बत्ती जाने बित्तिकै कति फेरि लोडसेडिङ त हुन लागेको हैन भन्ने संशय सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। घिसिङ अहिले बिजुली जानुमा दुई समस्या रहेको बताउँछन्। पहिलो व्यवस्थापनको कमजोरी र दोश्रो प्राविधिक कारण। उनी बत्ती जाने बित्तिकै तत्कालै काम गर्ने प्रवृति हटेको र विद्युत प्राधिकरणमा ‘चेन अफ कमाण्ड’को समस्या रहेको बताए। त्यस्तै पावरहाउस बन्द भए लोडसेडिङ गर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। त्यसका लागि पनि विद्युतको आपूर्ती तर्फ व्यवस्थापन गर्ने कौशल आवश्यक रहेको बताए।
कुलमानलाई सेतोपाटीले ट्रान्समिसन लाइनका लागि लिने भनिएको अमेरिकी सहयोग एमसिसी र काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत तार जमिनमुनि राख्दा जोखिम हुने उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको भनाइका विषयमा पनि प्रश्न गरेको छ। यो खबर सेतो पाटी बाट लिएको हो । भिडियो हेर्नुहोस….